I-china i-OEM Hand Sanitizer mveliso kunye nabenzi | Zhongrong
Ngaphantsi kwefuthe le-covid-19, Isandla I-Sanitizer iba yimfuneko yokhathalelo lobuqu kubomi bethu bemihla ngemihla ngakumbi kwezinye iindawo zikawonke-wonke ezinje ngesikolo, isibhedlele, ivenkile enkulu, ihotele, njl.
I-OEM kunye ne-ODM yamkelwe
Ngaphantsi kwefuthe le-covid-19, Isandla I-Sanitizer iba yimfuneko yokhathalelo lobuqu kubomi bethu bemihla ngemihla ngakumbi kwezinye iindawo zikawonke-wonke ezinje ngesikolo, isibhedlele, ivenkile enkulu, ihotele, njl. Njengoko sivelisa utywala obukrwada, amaxabiso ethu aya kukhuphisana nomgangatho ophezulu wezinto zokucoca izandla zethu. Ngapha koko, sidlule i-CE, i-FDA, kunye ne-ISO yokuqinisekisa. Sazisa uphawuI-TECH-BIO ukubenza njengophawu 1 lophawu lokususa iintsholongwane e-China njengoko sinobulunga obuphezulu botywala e-China. Siyinkokeli e-China kwitekhnoloji ye-ethanol. Sine-500,000 yendawo yokusebenzela yemitha kwiphondo laseHebei, China. Inkampani yethu yasekwa ngo-1999. Nangona kunjalo, sinako ukwenzaI-OEM kunye ne-ODM ukongeza ilogo yomthengi kunye nokwenza ivolumu yomnatha ngokwezifiso. Ukujonge phambili ekubeni liqabane lakho lehlabathi kwaye uzalisekise imeko yokuphumelela!
Umthamo womnatha: Ngentando
Izithako ezingasebenziyoAmanzi acociweyo, iCarbopol, Isopropyl Alcohol, Triethanolamine, Fragrance (eyenziwe ngokwezifiso).
Egqithileyo 50ml 75% Utywala obuneentsholongwane TECH-BIO
Okulandelayo: I-500ml yokuThambisa iSanitizer yesandla ngeTekhnoloji ye-BIO